Globalization ဆိုတာဘာလဲ | Mg Ogga's Notes
သမိုင်းတလျောက် ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းဖြစ်စဥ်ု၂ကြိမ်တိုင်တိုင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။
ပထမအကြိမ်ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကို ၁၇ရာစု အစောပိုင်း ကနေ ၂၀ရာစုဦးပိုင်း အထိ ဖြစ်ပေါ်ခဲ.
တယ်။ ပထမအကြိမ်ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကို ပထမစက်မှုတော်လှန်ရေး တွင်းစတင်ခဲ.ပြီး ဂျိမ်း(စ်)၀က်ရဲ.ရေနွေးငွေ.အင်ဂျင်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြင့်အစ ပြုတယ်။နောက်ပိုင်းမော်တော်ကား၊ကြိုးမဲ.
ကြေးနန်း နှင့် လေယဉ်ပျံများ ပေါ်ပေါက်လာ သောကြောင့် သယ်ယူပိုဆောင်ရေး စရိတ်ကိုအဓိက
လျော.ချနိုင်ပြီးကမ္ဘာကြီးကိုအလတ်စားအရွယ်သို.ရောက်အောင်ကြုံ.လိုက်နိုင်သည်။ပထမအကြိမ်ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း၏စီးပွားရေးမှာ မြေယာကဲလယ်ယာစီးပွားရေးစနစ်မှ အရင်းကဲစက်မှုစီးပွားရေး စနစ်သို.ပြောင်းလဲသွားသည်။
ပထမအကြိမ်ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနှင့်ဒုတိယအကြိမ်ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းတို. ကြား စစ်အေးကာလ ခြား ထားသည်။စစ်အေးကာလ မှာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီး မှဘာလင်တံတိုင်း အပြို ၊ ဆိုဗီယက်ယူနီယံအကွဲ အထိဖြစ်သည်။
စစ်အေး ခေတ်တွင်ကွန်မြုနစ်ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒီများကတစ်ဖက် အရင်းရှင်ဒီမိုကရေစီ
၀ါဒီများကတစ်ဖက်ဝါဒချင်းအားပြိုင်သောကာလဖြစ်သည်။အရှေ့အုပ်စု(ဆိုဗီယက်ခေါင်းဆောင်သော အုပ်စု)၊ အနောက်အုပ်စု(အမေရိကန်ခေါင်းဆောင်သောအုပ်စု) နှင့် ကြားနေအုပ်စု(ဘက်မလိုက်အုပ်စု)
ခြေမှာ အရှေ.အုပ်စု နဲ. အနောက်အုပ်စု ကြားအင်အားချိန်ခွင်လျှာညီမျှရေးအပေါ်မှုတည်တယ်။
၁၉၈၉-၁၉၉၀ တွင် စစ်အေးသင်္ကေတ ဘာလင်တံတိုင်းကြီး ပြိုချ လိုက် ပြီး စစ်အေး
ကာလကို အဆုံးသတ်လိုက်သည်။ဆိုဗီယက်ယူနီယံ ပြိုကွဲပြီး အရှေ.အုပ်စုနိုင်ငံ အတော်အများ လက်ဝဲ၀ါဒကိုစွန်.လွှတ်လိုက်တယ်။လက်ယာလစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီအောင်ပွဲခံပြီး ဒုတိယအကြိမ် ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကာလကို စတင်လိုက်တယ်။
ဒုတိယအကြိမ်ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကို စစ်အေးနေရာကို အစားထိုးဝင်ရောက်လာ
တဲ့နိုင်ငံတကာစနစ်တစ်ခုလို.ဆိုကြတယ်။မျက်မှောက်ခေတ်ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း(ဒုတိယအကြိမ်ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း)တွင် ဈေးကွက်၊ နည်းပညာ၊ အစိုးရ နှင့်လူတဦးချင်း စီကိုဆွဲ စုပေးသည်။အရှေ.
အနောက် ဆိုပြီး အုပ်စုမခွဲတော့ပဲ ကမ္ဘာအနုံ့ ကွန်ယက်ဖြန်.ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေမှာဖောက်သည်၊ ရန်သူမှာပြိုင်ဖက်ဖြစ်လာသည်။်အင်တာနက်၊ဂြိုလ်တု၊ပေါ်ပေါက်လာပြီးနည်းပညာမှာပိုမိုမြန်ဆန်လာ
သည် အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးစရိတ်များ အဓိကကျဆင်းလာပြီး ကမ္ဘာကြီး ကို အလတ်အရွယ်မှ အသေးစားအရွယ်သို.ကြုံပစ်လိုက်သည်။နိုင်ငံတကာ အား မျှခြေမှာ အစိုးရများ ကြားရှိအားမျှခြေ၊ အစိုးရ များ နဲ. ကမ္ဘာဈေးကွက်ကြားရှိအားမျှခြေ၊ လူတစ်ဦးချင်း နဲ. အစိုးရများ ကြားရှိအားမျှခြေ စသည် အားမျှခြေ ချိန်ခွင်သုံးလက်ပေါ်မူတည်သည်။
၂။ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနိမိတ်ပုံ(လက်ဇပ်ကား နဲ. သံလွင်ပင်)
လက်ဇပ်ကား သည် ယနေ.ခေတ်၏အဆင်အမြင့်ဆုံးနည်ပညာများဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသည်.
ဇိမ်ခံကားဖြစ်ဘသည်။ လက်ဇပ်ကား သည် ယနေ.ခေတ်၏အဆင်အမြင့်ဆုံးသောလူနေမှု အဆင့်အတန်းများ၊နည်းပညာများ နှင်.ခေတ်မီမှုအခြင်းအရာအားလုံးကို ကိုယ်စားပြု သည်။
သံလွင်ပင် သည် သဘာဝ သယံဇာတ၊လူမျိုးရေးစံ၊ဘာသာတရား၊ယဉ်ကျေးမှု စသည်. လူမှုရေးယဉ်ကျေးမှုစံနှုန်းများကို ကိုယ်စားပြုသည်။
မျက်မှောက်ခေတ်ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းသည် လက်ဇပ်ကားနဲ. သံလွင်ပင်တို.ကြားရှိ အညမညဖြစ်စဉ်ပင်ဖြစ်သည်။လက်ဇပ်ကား မရှိသည်.နိုင်ငံသည် ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းဖြစ်စဉ်ကို အမီလိုက် နိုင်ရန်ခက်ခဲသည်။သံလွင်ပင်မရှိသည်နိုင့်ငံသည် လည်းဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း ဖြစ်စဉ်တွင်ကောင်းကောင်း မတည်တံနိုင် တခြားယဉ်ကျေးမှုဝါးမြို ခံရ နိုင်သည်။
သံလွင်ပင်ကို တန်ဖိုးထားမြတ်နိုးလွန်းလျင် အခြားလူမျိုးများအပေါ်မုန်းတီး ရန်လိုတဲ့ မျက်ကန်း အမျိုးသားရေးပုံစံ သို.ရောက်သွားနိုင်သည်။လက်ဇပ်ကား ကိုပဲ တန်ဖိုးထားနေလျင် လူမျိူး နှင်.ယဉ်ကျေးမှုပျောက်ကွယ် သွားနိုင်သည်။ထိုလက်ဇပ်ကားနှင့်သံလွင်ပင်ကြား အညမညဖြစ်စဉ်ကို မလျော့ မတင်းစောင်းကြိုးညင်း ပုံစံဖြင့်သာ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် တီးခတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၃။ လစ်ဘရယ်လိုက်ဇေးရှင်း / ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနောက်တွင် လစ်ဘရယ်လိုက်ဇေးရှင်းက အရိပ်လိုလိုက်ပါလျက်ရှိ
Internet နည်းပညာကြောင့် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး၊တစ်နေရာမှတစ်နေရာ ဘယ်လောက်ဝေး
ဝေး သတင်းအချက်အလက် မျာများကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်၊ဈေးပေါပေါ ဖြင့်ဆက်သွယ်လာနိုင်သည်
ဖွံဖြိုးဆဲနိုင်ငံမျာတွင် ယခင်က ကုန်ကြမ်းပေးကုန်ချောယူစနစ် မှကုန်ကြမ်းကို ကုန်ချောအဖြစ်သို.
သွယ်ရေးစနစ်ပိုမိုမြန်ဆန်လာသည်။မိုက်ခရိုချစ်(ပ်)အားနည်းမှုရောဂါ ရှိလျင် သတင်းအချက်အလက်
ရရှိနိုင်မှု နည်းပါး ပြီး ဆုံးဖြတ်ချမှတ်ရာတွင်လည်း နှေးကွေးမည်။မိုက်ခရိုချစ်(ပ်)ချို.တဲမှုရောဂါ မရှိ မှသာ သတင်းအချက်အလက်များကို ရရှိနိုင်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်အချလည်းမြန်ဆန်လာမည်ဖြစ်သည်။
အရင်းအနီုးစီးဝင်မှု များလွတ်လပ်လာ ပြီး ကော်ပိုရေးရှင်းများမှ ကော်ပိုရီတ်ဘွန်းများကို လူထု ထံသို.ရောင်းချလာသည်။ စီပွာရေးမူဝါဒ အရ လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒကို ချမှတ်ကျင့်သုံး လာသည်။
ဇေးရှင်းကြောင့်ဆင်းရဲသောနိုင်ငံများပိုမိုဆင်းရဲသွားသည့်နှင့်ကြုံတွေခဲ့ရသည်။ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း ဖြစ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အားနည်းချက်များ ဒုနဲ.ဒေးပင် ရှိသည်။
ဆင်းရဲသည့်နိုင်ငံများးံဆင်းရဲသောနိုင်ငံများပိုမိုဆင်းရဲသွားသည်။ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက် ပြီင်္း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ ယုတ်လျော.လာသည။်
လာသည်။ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းဖြစ်စဉ်ကြီးက ဆင်းရဲသားများသော သူဌေးနိုင်ငံတွေမွေးထုတ်ပေးသလို
အဓိက အားနည်းချက်မှာ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းမဟုတ် ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကို မောင်းနုင်ထိန်းကျောင်းပေးသည်.စနစ်သာဖြစ်သည်။ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းဖြစ်စဉ်တွင် ပြောင်းလဲစရာ
အမြောက်အများရှိသည်။မူဝါဒများ၊ စီးပွာရေး နိုင်ငံရေး အဇွဲ.အစည်းများ။စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ သာမက
လူတို.၏ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှု အမှုအကျင့်များပါ ပြောင်းလဲနိုင်မှသာလျင် ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းဖွံဖြိုးရေး
လမ်းကြောင်းပေါ်မှမသွေဖယ်ပဲလျှောက်လှမ်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲ အင်ဂလိုအမေရိကန်လစ်ဘရယ်မိုဒယ် တစ်ခုတည်းဖြင့် ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းဝဋ်နာကံကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်မည်မဟုတ်ချေ။
P.S: Egress တက်တုန်းက ရေးထားတဲ့ Assignment တစ်ခုပါ ပြန်တွေလို့တင်ထားတာပါ။ Thomas L. Friedman ရဲ့ THE LEXUS AND THE OLIVE TREE စာအုပ်ကို ဆရာမောင်စူးစမ်း ဘာသာပြန်ထားတဲ့ လက်ဇပ်ကားနှင့်သံလွင်ပင် အဓိက ကိုကားပါတယ်။
ပုံကို http://andrewjuderajanathan.files.wordpress.com မှ ကူးယူပါတယ်
December 17, 2009 in ဆောင်းပါး.
လုပ်လက်စကို ခဏရပ်တန့်ခြင်း →
2 thoughts on “Globalization ဆိုတာဘာလဲ”
စာတွေနှစ်ခါထပ်နေတယ်.. သြော် ကိုဥဂ္ဂါလည်း egressကလား အဲမှာ သူငယ်ချင်းတွေအများကြီးပဲရှိတယ်.. ကိုးကားထားတဲ့ မူရင်းစာတော့မသိဘူး ခုဟာဖတ်ရတာတော့ အတော်ကောင်းတယ်
ဟုတ်ကဲ ကျွန်တော် egress အမှတ်စဉ်လေးဆင်းပါ ဟုတ်တယ် နှစ်ခါထပ်နေတယ်နော် အခုပြင်လိုက်ပြီ ကျေးဇူးပဲနော်